Hydrocephalus (ဦးနှောက်အရည်ကြည်များ ဦးနှောက်အတွင်း စုစည်းခြင်း) - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အောက်တိုဘာ 10, 2018 Panu Nacharoong, M.D.
ဦးနှောက်အတွင်း အရည်ကြည်များ စုစည်းရခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေချိန်တွင်း ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှု ပုံမမှန်ခြင်းကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ မျိုး ရိုးတွင် ပုံမမှန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သော် လည်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏာ မျိုးကို မည်သည့် အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားမဆို အချိန်တိုင်းသိသာ မြင်သာ နိုင်ပါသည်။
Shunt ခွဲစိတ်မှုသည် ဦးနှောက်ရည်တည်သော ရောဂါအတွက် တစ်ခုတည်း သော ကုသမှုပင်ဖြစ်သည်။
ဦးနှောက်အရည်ဖယ်ထုတ်သည့် ခွဲစိတ်မှုမျိုးသည် လူနာ၏ ကျန်းမာရေး ပုံမမှန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများကို လျှော့ချပြီး၊ ပိုမို၍ ကျန်းမာရေး ကောင်းပြီး ကောင်းကျိုးများ ပိုမိုရရှိခံစားနိုင် စေရန်အတွက်ပင် ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ တာ လုပ်ဆောင်သွားရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လွယ်ကူစွာ ပြီးစီးအောင် ကူညီပေးသွားနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဦးနှောက်၏ အဓိကအာ ရုံကြောမကြီး လုပ်ဆောင်ချက် မပျက်ယွင်း သွားခင်တွင် ထိုခွဲစိတ်မှုမျိုးကို မဆိုင်းမတွ လုပ်ဆောင်ရပါသည်။
ဦးနှောက်အရည်တည်ခြင်းသည် အလွန်စိုးရိမ်ရသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်အ တွင်းရှိ အခန်း၌ သာမန်ရှိသင့်သော ပမာဏထက်ပို၍ အရည်စုဆောင်းလာသည့် ပြဿ မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ပ်တို့၏ ဦးနှောက်နှင့် ဦးနှောက် အာရုံကြောမကြီးသည် ထို CSF ခေါ် ဦးနှောက်ရည်ဖြင့် ဝန်းရံတည်နေလျှက်ရှိရာ ထိုအရည်များ လည်ပတ်ရန်တွက် နေရာတစ်နေရာတွင် ပိတ် ဆို့မှုမျိုးရှိလာပြီး ဦးနှောက်အတွင်းခန်းမှ အရွယ် အစားကြီး လာကာ ဦးနှောက်အတွင်း ပို ၍ ရည်ဖိအားများလာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့သည်။
ထိုဦးနှောက်အရည်ကြည်များ ဦးနှောက်အတွင်းစုစည်း ခြင်းမျိုးတွင် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိပြီး ဦးနှောက် အရည်ကြည် လည်ပတ်သည့် communicating hydrocephalus နှင့် ရည်တည်ခြင်းနှင့် ဦးနှောက်ရည် မလည်ပတ်နိုင်သည့် Non-communicating hydrocephalus ဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်ရည် လည်ပတ်နိုင်ခြင်း အမျိုးအစားမှာ ဦးနှောက်အခန်းများတွင် ရည်လည်ပတ်နိုင်ပြီး ထိုအခန်းမှ အရည်ပြန်ထွက်သွားရာတွင် ပိတ်နေခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်ရည် မလည်ပတ်နိုင်သည့် ရပ်တည်ခြင်းမှာ ဦးနှောက်အခန်း ငယ်ကလေးများ၏ နေရာကျဉ်းမြောင်းလွန်း၍ အရည်များ ရွေ့လျားသွားလာမှု မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ များမကြာတွေ့ရသည့် ရောဂါမျိုးသည် ဦးနှောက်အရည် လည်ပတ်သည့် အခန်း (၃)နှင့် အခန်း(၄)တွင် ကျဉ်းမြောင်းခြင်း (Aqueductal Stenosis) ကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေါ်ရပါသည်။
အချို့သော ဦးနှောက်ရည် စု ခြင်းများမှာ မွေးရာပါပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း မှာ သန္ဓေသား ကိုယ်ဝန်ချိန်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ မျိုး ရိုးဗီဇတွင် ပုံမမှန်ပါလာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်ရည် စုခြင်းမျိုးမှာ မွေးဖွားပြီး နောက်မှ ဖြစ်လာလျှင် ထိုသို့သော အရည်တည်ခြင်းကို ထိခိုက်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်တည် လာသော အရည်တည်ခြင်းဟူ၍ သတ်မှတ်ပြီး မည်သည့်အရွယ်မဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိခိုက်မှု ရှိသွားခြင်း၊ ရောဂါများကြောင့်မှ တဆင့် ဖြစ်လာရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော အလွန်ရှားပါးသည့် ရပ်တည်ခြင်းမျိုးသည် အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်တွင် မည် သည့်လက္ခဏာမှ ပြသခြင်းမျိုးမရှိဘဲ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှသာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ် သေးသည်။ လူတိုင်းတွင် ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုး အမြဲပင် မတွေ့ရသော်လည်း ထိုအရည်စုလာရ ခြင်းသည် ဦးနှောက်ရည်သွားရာ လမ်းကြောင်း ကျဉ်းသော ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင် ဆရာဝန်များအနေဖြင့် ထိုဦးနှောက်ရည်တည်ခြင်း ရောဂါ ကို မှန်ကန်စွာ သိရှိနိုင်ရေးအတွက်နှင့် ကုမှု(shunt) ခေါ် ဦးနှောက်ရည်ပိုလွဲ ခွဲစိတ် ကုသမှု ထိရောက်စွာ ပေးနိုင်ရေးများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ထိုကဲ့သို့သောရောဂါ သံသယဖြစ်လျှင် ဆေးစစ်ချက်များစွာ စစ်ရပေမည်။
ထိုရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိရန် စစ်ချက်(၄)မျိုးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆေးခန်းတွင် ဆရာဝန်ဖြင့် အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာ လှုပ်ရှားခြင်း ပုံမှန်ရှိမရှိ မေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်
ဦးနှောက်တွင်းမှ အခန်းများကြီးခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ဦးနှောက်စစ်ဆေး သည့်
CT (သို့မဟုတ်) CAT Scan ရိုက်ရပါသည်။
ထို့ပြင် CSF ခေါ် ဦးနှောက်အရည်သည် Shunt ဟု ခေါ်ဆိုသည့် ရည်ပိုလွဲကို တုန့်ပြန် မှု ရှိမရှိ တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်။
CSF ခေါ် ဦးနှောက်အရည်၏ စီးဆင်းတုန့်ပြန်ချက်အပေါ် တိုင်းတာရန်
ခါးနောက်မှ အရည် ပမာဏ ထုတ်စစ်တိုင်းတာခြင်း
လူနာတစ်ယောက်သည် ထိုသို့သော ဦးနှောက်ရည်တည်သည့် ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ သံသ ယ ဖြစ်လျှင်ဖြစ်ခြင်း ဦးနှောက်အာရုံကြော ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဦးနှောက်အာရုံကြော ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တို့မှာ ဤရောဂါကုသရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အလွန်အရေးကြီး သော သူများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆရာဝန်များသည် ဆေးစစ်ချက်များ၏ အဖြေကို သုံး သပ်ဆောင်ရွက်ပြီး လူနာသည် shunt ခေါ် ဦးနှောက်ရည်ပိုလွဲ ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ရန် သင့်တော်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။ ထိုဆရာဝန်ကြီးများအနေဖြင့် လူနာတွင် ထိုသို့ ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရှင်းပြပြီး၊ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများလိုကြောင်း၊ ခွဲစိတ်မှု၏ ဆိုးကျိုးနှင့် ကောင်းကျိုးရလဒ်များကိုပါ တစ်ပါးတည်းဆွေးနွေး ပြောကြရ မည် ဖြစ်ပါသည်။
Shunt ရေပိုလွဲပစ္စည်းဆိုသည်မှာ ဦးနှောက်ရည်တည်ခြင်း ရောဂါဖြစ်သည့်အချိန်တွင် ဦးနှောက်မှ အရည် (CSF)များကို ကိုယ်ခန္ဓာ၏ စုတ်ယူလွယ်သည့် အခြားအင်္ဂါတစ်ခုသို့ စီးဆင်းသွားနိုင်ရန် ခွဲစိတ်ပြီး ထည့်ပေးသည့် ရေပိုလွဲ ပစ္စည်းလေးပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယေဘုယျအနေဖြင့် (shunt) ရေပိုလွဲ အစီစဉ်တွင် ပစ္စည်းသုံးမျိုးပါဝင်ပါသည်။
ဦးနှောက်အတွင်းထဲတွင်ရှိသော အခန်းများတွင်ထည့်ရန် ပြွန်ချောင်း
CSF ခေါ် ဦးနှောက်မှအရည်ကို ချိန်ဆပေးသည့် အဆို့ရှင်
ခန္ဓာကိုယ်တွင်းပိုင်းအင်္ဂါ (သို့) ဦးနှောက်ရည်များ စီးဆင်းရန်အတွက် ပြန်ချောင်း
အထက်ပါပစ္စည်း အားလုံးတို့သည့် ခွဲစိတ်ထည့်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း ပိုင်း အရေပြားအောက်တွင်သာ ထားရှိပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ အပြင်ပိုင်းသို့ တစ်ခုမျှ ဖွင့်ထွက် နေခြင်းမျိုးမရှိပါ။ အခြားသော မတူသည့် ကုသမှု တစ်ရပ်မှာ ဦးနှောက်နံပါတ်အခန်း(၃) ကို တိုက်ရိုက်မှန်ပြောင်းဖြင့် ခွဲစိတ် အပေါက်ဖောက်ပြီး ကုသရာ၊ ထိုကုသမှုမှာ လူနာလူ နည်းစုတွက်သာပင် ဖြစ်သည်။
ဦးနှောက်အာရုံကြော မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဖိုင်ဘာနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဦး နှောက်အခန်း၏ မျက်နှာပြင်ထိတ်သို့ သေးငယ်သော ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ပြီး ကြည့်ရသည့် အရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဦးနှောက်အာရုံကြောမှန်ပြောင်းကို တည်နေ ရာ ချိန်ဆရန် ရှင်းပြပြီးလျှင် ထိုဦးနှောက် အရည်တည်သည့် အခန်းနံပါတ်(၃)ဆီသို့ အပေါက်သေးလေး ဖောက်ရပါသည်။ ထို့နောက် CSF ဦးနှောက်အရည်၊ ဦးနှောက်၏ မျက်နှာပြင် အပေါက်မှတဆင့် စီးဆင်းသွားပြီး လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းများကို တား ဆီးပေးပါသည်။
ဦးနှောက်အရည်တည်ခြင်းကြောင့် shunt ခေါ် ရည်ပိုလွဲကိရိယာ ခွဲစိတ်ထည့်ပေးခြင်း သည် လူနာတိုင်းအတွက် သင့်တော်သည့် ကုသမှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား?
Shunt ဦးနှောက်အရည်ပိုလွဲပစ္စည်း ခွဲစိတ်ထည့်ခြင်း၌ မည်သို့သော လူနာတွင်မူ ဤကဲ့ သို့ ကုသမှု အောင်မြင်စွာ ပေးသွားနိုင်ဟူ၍ တိုင်းတာချိန်ဆသော အချက်အလက်များ စွာရှိပါသည်။ ဤသို့ Shunt ထည့်ပြီး ပို၍သာလွန်သည့် ရလဒ်ကောင်းထွက်နိုင် ရန်တွက် အောက်ပါအချက်များနှင့် ဆီလျော်ရမည်။
ဝေဒနာ လက္ခဏာ စတင်ချိန်
ဦးနှောက် Ventricle ခေါ် အခန်း၏ အရွယ်အစားသည် ဦးနှောက် ကာထားသည့် အလွှာရှိသည့် နေရာထက်ပင် ဦးနှောက် scan ဖတ်စစ်သောအခါ များစွာကြီးမား ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
CSF ခေါ် ဦးနှောက်အရည် စီးဆင်း တုန့်ပြန်ချက် မြင့်တက်လာခြင်း (သို့မဟုတ်) သာမန်မှ သွေဖယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ICD တွင် ပုံမမှန်သော ဦးနှောက်ပင်မအရည် ဖိအား ဦး နှောက် အာရုံကြော အရည်ဖိအား ပုံမမှန်သည့် ပမာဏပေါ်ခြင်း။
ဦးနှောက်အရည်တည်သည့် လူနာများသည် ပြီးပြည့်စုံစွာ ပြန်လည်ကျန်းမာလာသည့် အခြေနေမျိုးမှာ အလွန်က်ိုရှားပါးသော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါသည်။ အကယ်၍ လူနာ သည် ဤခွဲစိတ်မှု ခံယူပြီးနောက်တွင် အရည်အသွေး ပြည့်စုံသော ကျန်းမာရေး ပြန် လည်ရရှိခြင်း၊ ခွဲပြီးနောက်ပိုင်း ဦးနှောက်အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ကာကွယ် သွားနိုင်ခြင်းနှင့် မခွဲစိတ်မှီတွင် မိမိကိုယ်ကို မမှီတည်နိုင်သော (သို့မဟုတ်) ကိုယ်အင်္ဂါ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွင် အခက်ခဲရှိသော ပြဿနာများ လျော့နည်းသွားလျှင် လူနာရှင် မိသားစုများနှင့် လူနာတို့သည် အောင်မြင်သော ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါ သည်။
ဦးနှောက်ရည်တည်သော ပြဿနာရှိသော လူနာများကို (shunt) ပစ္စည်း ရေပိုလွဲထည့် ခြင်းဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသရန် အများဆုံးအကြံပြုသော ကုသမှုပင်ဖြစ်သည်။ လူနာကလေး သည် ဦးနှောက်ရည်တည်သောအခါ ဦးနှောက်အခန်းမှ ထည့်ထားသော stunt ပစ္စည်း ပြွန်သည် ကလေး၏အခြား ကိုယ်အင်္ဂါတွင်းသို့ အရည်များစုတ်ယူ စီးဆင်းသွားပါသည်။ဤကုသခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေး၏ ဦးနှောက်အတွင်းရှိသော CSF အရည် ကြောင့် ရည်ဖိအားများလာခြင်းကို လျော့သွားရန် အရည်စီးဆင်း ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ် သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ထိုစွန့်ထုတ်စီးဆင်းသော အရည်များကို ပြွန်ဖြင့် ဝမ်းဗိုက် သို့ ပ်ို့လိုက်သည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်သည့်အရာကို (Ventriculoperitoreal Shunt) (VP-Shunt) ဟုခေါ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ ထိုသို့သော shunt ရေပိုလွဲမှ စီးဆင်းဆက်သွယ်မှုကို အဆုတ်၏အလွှာပါးသော် လည်းကောင်း၊ နှလုံးအခန်း၏ အ ပေါ်ခန်းသို့သော်လည်းကောင်း လွဲပို့စီးဆင်းစေသည်။
ဦးနှောက်ရည်တည်သော ရောဂါ၏ လက္ခဏာများ အသက်အရွယ်မမွေးခင်မှ အသက် အရွယ်ရလာသည့် လူကြီးပိုင်းအထိ မတူညီသော ဝေဒနာလက္ခဏာများ ရှိကြပါသည်။ မိခင်ကိုယ်ဝန်တွင်းရှိချိန်တွင် မိမိ၏ရင်သွေး၌ ဦးနှောက်တွင်း နေရာကျယ် (သို့) အခန်း ကျယ်ရှိမရှိ သိရှိရန် ပုံမှန် အာထရာဆောင်း ရိုက်သွားသင့်ပါသည်။ မွေးကင်းစ ကလေး ငယ်တွင်မူ အလွန်သိသာ မြင်သာလွန်းသည့် လက္ခဏာမှာ ဦးခေါင်း အလွန်ကြီးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကလေးငယ် အရွယ်ရောက်လာသောကလေး ဖြစ်သောချိန်တွင် ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မြင်သာသော လက္ခဏာ နည်းလာပြီး အခြားသော ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ခေါင်း ကိုက်ခြင်းနှင့် အမြင်အာရုံ မှုန်ဝါးနေခြင်းမျိုးသာ ပို၍ ဖြစ်တတ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ထိ ထိုရည်တည်ခြင်း၏ ခံစားရသော ဝေ ဒနာများမှာ မူးဝေခြင်း၊ အမြင်အာရုံ အစရှိသော လက္ခဏာများမှာ အဓိက ခံစားရသော လက္ခဏာပင် ဖြစ်သည်။ လူကြီးပိုင်းတွင်မူ သူတို့၌ ရည်ဖိအား ပုံမှနှ်နှင့် ရည်တည်ခြင်း မျိုး (NPH) ရှိလာပါက ခံစားရသော လက္ခဏာ ဝေဒနာမှာ ပို၍ဆိုးဝါးသည်။ ထိုသို့သော ဆိုးဝါးသော လက္ခဏာများရှိလာလျှင် လမ်းလျှောက်သည့် အပိုင်း၊ အတွေး အခေါ် မခိုင်လုံခြင်း (သို့) အဆီအငေါ်မတည့်ခြင်းနှင့် ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပေသည်။
ထိုသို့သော ရောဂါများကို ကြိုတင်စစ်ဆေးရန်နှင့် ကုသမှုများကို ဆောလျင်စွာ ဆောင် ရွက်နိုင်ရန် လူနာ၌ အောက်ပါကျန်အင် လက္ခဏာများကို စိုးရိမ်ရသော အချက်ဖြင့် သိမှတ်ထားရမည်။ ထိုအရာများမှာ-မွေးကင်းစကလေးအရွယ်
ဦးခေါင်းပုံသဏ္ဍန် မမှန်ဘဲ ကြီးနေခြင်း
ငယ်ထိပ်လေးသည် သိသာစွာ ထွက်နေပြီး တင်းနေခြင်း၊ ပျော့သည့်နေရာလယ်
ဦးခေါင်းဦးရေပြားပေါ်တွင် သိသာမြင်သာသော သွေးပြန်ကြောများရှိခြင်း
ဦးခေါင်းအရိုးကြားတွင် ကွာဟနေသည်ဟု ခံစားရခြင်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း
မျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံး အောက် စိုက်သည့် အနေအထားဖြစ်ခြင်း
ကြာရှည်စွာ အဆက်မပြတ် ခေါင်းကိုက်ခြင်း
ရှင်းလင်းစွာ မစဉ်းစားတတ်ခြင်းနှင့် အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း
ဆီးထိန်းနိုင်မှု အားလျော့နည်းလာခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆီးမထိန်းနိုင်တော့ခြင်း
Hydrocephalus (ဦးနှောက်အရည်ကြည်များ ဦးနှောက်အတွင်း စုစည်းခြင်း) ဦးနှောက်အတွင်း အရည်ကြည်များ စုစည်းရခြင်း အကြောင်းအရင်းများမှာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေချိန်တွင်း ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှု ပုံမမှန်ခြင်းကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ မျိုး ရိုးတွင် ပုံမမှန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သော် လည်းကောင်း
User rating: 3.78 out of5with 18 ratings
Summary: Surgery Neurological Surgery